हे भगवान कस्तो दर्दानाक अवस्था यो ? ८० बर्षको उमेरमा पनि यस्तो जोखिम काम , आफ्नो दुख सुनाउदै डाको छोडेर रोए (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > हे भगवान कस्तो दर्दानाक अवस्था यो ? ८० बर्षको उमेरमा पनि यस्तो जोखिम काम , आफ्नो दुख सुनाउदै डाको छोडेर रोए (भिडियो सहित)
धादिङ्गका सुक बहादुर चेपांग नाम गरेका ८० बर्षिय बृद्ध जसका एक अपांग छोरा पनि छन् । सुक बहादुर चेपांग एक पेट पाल्नका लागि त्रिशुली नदिमाथि रहेको तुइन तान्ने काम गर्छन । ८० बर्षको उमेरमा आफ्नो अपांग छोरा र आफ्नो पेट पाल्न २० बर्ष देखि उनि तुइन तानिरहेका छन् । चरौती भन्ने ठाउँमा उनि बस्ने गर्छन । उनको बस्नलाइ घर छैन उनि पुल मुनि बाट बस्ने गर्छन ।
प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले देश भरका तुइन विस्थापित् गर्न रणनीति गरे पनि अझै सबै ठाउमा विस्थापन हुन सकेका छैनन् । पकाउने ,खाने र सुत्नका लागि कुनै भान्षा ,ओक्षान र खानेकुरा केहि छैन । अन्य जानकारी तल भिडियोमा हेर्नुहोला र बृद्ध बुबालाई सहयोग गर्नका लागि यो भिडियोलाइ धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्दिनुहोला ।
मोरङमा अचम्मै भयो : बाँसको झ्याङमा भैसी लगेर दुवै खुट्टा बाँधेर भैंसी बलात्कार